माउन्ट फुजी: जापानमा १ best उत्तम दृश्य ठाउँहरू! - Best of Japan
माउन्ट फुजी = एडोब स्टक
यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई माउन्ट हेर्न सबै भन्दा राम्रो दृष्टिकोण देखाउनेछु। फुजी माउन्ट फूजी जापानको सब भन्दा अग्लो पहाड हो जसको उचाई 3776। .XNUMX मिटर छ। त्यहाँ माउन्टको ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बनाईएको तालहरू छन्। फुजी, र यसको वरिपरि एउटा सुन्दर परिदृश्य सिर्जना गर्दै। यदि तपाई धेरै माउन्ट हेर्न चाहानुहुन्छ। फुजी, म लगातार पाँचौं माउंट मा जान सिफारिस गर्ने छैन। फुजी किनकि तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ फुजी। मलाई सबैभन्दा मनपर्दो दृश्य विन्दु एकदम शान्त तालको मोटोसु हो। ठिक छ, तपाई माउन्ट कहाँ हेर्न चाहानुहुन्छ? फुजी?
माउन्ट फुजी शरद autतु देखि वसन्त सम्म हिउँले ढाकिएको छ। जाडो मौसममा, हावा स्पष्ट छ, त्यसैले तपाईं टोकियोबाट पनि राम्रो पर्वत फुजी देख्न सक्नुहुन्छ। माउन्ट फुजीका बारे विवरणहरूको लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। सामग्रीको तालिका माउन्ट्सको फोटोहरू माउन्टको फुजीम्याप माउन्टको फुजी फोटोहरू फुजी ...
व्यक्तिगत रूपमा, माउन्टको मेरो मनपर्ने दृश्य फुजी भनेको माउन्टको उत्तर तर्फ मोटोस तालको उत्तरी तटबाट देखी सूर्योदय हो। फुजी त्यहाँ मोटोसु तालको वरिपरि सानो कृत्रिम प्रकाश छ, त्यसैले तपाईं माउन्ट साक्षी दिन सक्नुहुन्छ। प्राचीन जापानी द्वारा देखेको रूपमा फुजी। यहाँबाट देखिएको दृश्य छापिएको छ ...
जुलाईको शुरुदेखि सेप्टेम्बरको शुरुमा, जापानमा, तपाईं माउन्ट माउण्टेन सक्नुहुन्छ। फुजी (3,776 मिटर) यस समयमा माउन्ट फुजीसँग लगभग कुनै हिउँ छैन। यो hours घण्टा लिन्छ foot स्टेशनबाट पैदल जति बस बस माथि आइपुग्छ। यदि तपाईं आरोहण गर्दै हुनुहुन्छ भने, म सूर्योदय हेर्ने सल्लाह दिन्छु ...
>> तलको नक्शा छविमा क्लिक गर्नुहोस् एक अलग पृष्ठ <मा नक्शा हेर्नका लागि
माउन्टको नक्शा फुजी
अरकुरायामा सेन्जेन पार्क
गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरू
फुजी शिबाजाकुरा फास्तिवलको स्थान
मिहो कुनै मत्सुबार
Enoshima टापु वरिपरि
माउन्ट फुजी 5th औं स्टेशन
माउन्टको शिखर सम्मेलन फुजी
कावागुचिको स्टेशन, पर्यटकहरू यात्रा बस सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्। यातायात दुबै रेल र बस = शटरस्टकका लागि धेरै सुविधाजनक छ
माउन्ट वरपरको वातावरण भएकोले फुजी धेरै विशाल छ, त्यहाँ टोकियोबाट जाँदा विभिन्न मार्गहरू छन्। सामान्यतया, तपाई सजिलैसँग विभिन्न बसहरू प्रयोग गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा जान सक्नुहुन्छ। माउन्ट जाने बसको विवरणका लागि। Fuji, कृपया निम्न Fujikyuko बस साइट हेर्नुहोस्। टोकियोको शहर केन्द्रबाट माउन्ट वरपरका ठाउँहरू। फुजी, यो बस मार्फत २ घण्टा लाग्छ।
जब तपाईं माउन्ट टुरिस्ट आकर्षणको वरिपरि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। फुजी, तपाईंले बस प्रयोग गर्नु पर्छ। Fujikyuko बस मुख्य पर्यटक आकर्षण को आसपास यात्रा बस चक्करमा बसहरु ड्राइभ गर्दैछ।
यी बसहरूको लागि, कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् Fujikyuko बस को आधिकारिक वेबसाइट.
Kawaguchi-ko, तपाईं पनि ट्रेन लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा, पहिले JR Chuo मुख्य लाइन प्रयोग गरेर JR Otsuki स्टेशन जानुहोस्। यदि तपाईं ओत्सुकी स्टेशनबाट फुजीकिyu लाइनमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने, अन्तिम पोइन्ट कावागुचिको स्टेशन हो। यसले Otsuki स्टेशन बाट कावागुचीको स्टेशन को लागी minutes 55 मिनेट लिन्छ।
Fujikyu रेलवे मा अधिक जानकारी को लागी, कृपया हेर्नुहोस् Fujikyu रेलवे को आधिकारिक वेबसाइट.
यदि तपाईं गोटेम्बा वरपरको इलाकामा जानुहुन्छ भने, म ओडाक्यू इलेक्ट्रिक रेलवे एक्सप्रेस "फुजीसन" सिन्जुुकु स्टेशनबाट प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु। Shinjuku स्टेशन बाट गोटेम्बा स्टेशन को लागी, यो लगभग १ घण्टा 1 35 मिनेट सीमित एक्सप्रेस "Fujisan" द्वारा छ।
एक्सप्रेस ट्रेन "फुजीसन" को लागि कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् Odakyu इलेक्ट्रिक रेलवे को आधिकारिक वेबसाइट.
FUJI-Q HighLand "= शटरस्टकमा Eejanaika रोलर कोस्टर
यदि तपाईं माउन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने। तपाईंको साथीहरू वा बच्चाहरूसँग कतै रमाईलो ठाउँबाट फुजी, म सिफारिस गर्दछु फुजी - क्यू हाइलैंडमा जानको लागि।
फुजी - क्यू हाइलैंड माउन्टको उत्तर तिर एक मनोरञ्जन पार्क हो। फुजी यहाँ, तपाईं माथिको चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै आकर्षणहरू छन् जस्तै रोलर कोस्टरहरू।
फुजी - क्यू हाइलैंड प्रवेश गर्न स्वतन्त्र छ र व्यक्तिगत रोलर कोस्टरहरू र त्यस्तै सवारीहरूमा पैसा तिर्ने संयन्त्र छ। किनकि यो मनोरञ्जन पार्क अन्य पर्यटक गन्तव्यहरू जस्तै कावागुचीको तालको नजिक छ, यस मनोरञ्जन पार्कबाट तपाईं अन्य पर्यटन गन्तव्यहरूको लागि रोक्न सक्नुहुन्छ।
फुजी-क्यू हाइलैंडको सम्बन्धमा, मैले निम्न लेखमा विस्तारपूर्वक परिचय दिएँ।
>> फुजी-क्यू हाइलैंडको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
रातो प्यागोडा माउन्ट फुजीको साथ पृष्ठभूमिमा = शटरस्टक
अरकुरायामा सेन्जेन पार्क विदेशी पर्यटकहरूका लागि धेरै लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण हो। जब तपाईं पहाडको बीचमा चढ्नुहुन्छ, सुन्दर माउंट। फुजी "पाँच-मंजिला पागोडा" पछाडि देख्न सकिन्छ। चेरी फूलहरू अप्रिलको सुरूमा पनि सुन्दर हुन्छन्।
ठ्याक्कै भन्नुपर्दा, यो "पाँच-मंजिला प्यागोडा" प्यागोडा होइन, तर युद्ध मरेका स्मारक टावर हो। तर यो प्यागोडा जस्तो देखिन्छ। त्यस्ता पागोडा र माउन्ट सँगै राख्नको लागि अरू कुनै ठाउँ छैन। एक चित्र मा फुजी।
पाँच तले पागोडामा जानका लागि आगन्तुकहरूले 398 XNUMX steps कदमहरू माथि जानु पर्छ। मैले बुढापाकालाई यो सीढीबाट तल झर्दै गरेको देखेको छु। यदि तपाईको बुबा वा आमा भर्खर पहाडको यो पहाडमा जान चाहानुहुन्छ भने, म सिढीहरूको छेउमा चढ्न सिफारिश गर्दछु। यदि तपाईं ढलान माथि जानुहुन्छ भने, दूरी लामो हुनेछ, तर तपाईं बिस्तारै सानो चौडाइको साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।
अरकुरायामा सेन्जेन पार्क फुजिक्यू रेलवेको शिमोयशिदा स्टेशनबाट १ 15 मिनेट पैदल यात्रामा छ।
तपाई माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। फुजी र ताल कावागुचिको, माउंट काचीकाची, जापानको रोपवेबाट
जापानीहरु माउंट हेर्न जाँदैछन् भने। फुजी, दर्शनीय स्थल जुन पहिले दिमागमा आउँदछ सायद कावागुचीको ताल हो।
माउन्टको उत्तरी तर्फ फुजी त्यहाँ पाँचवटा तालहरू छन् जुन माउन्ट्सको ज्वालामुखीय गतिविधिबाट जन्मेका छन्। फुजी तिनीहरूलाई "फुजी गोको (फुजी फाइव लेक)" भनिन्छ। ती मध्ये टोकियोको नजिकै रहेको कावागुचिको ताल सबैभन्दा लोकप्रिय ताल हो।
कावागुशीको ताल १ kilometers किलोमिटर जति छ र यमनाक ताल पछि फुजी फाइभ लेकहरूमध्ये दोस्रो ठूलो हो। यस तालको समुद्री सतह 19 839 m मीटर छ। पूर्वी किनारमा एक स्पा रिसोर्ट छ "फुजी-कावागुचिको ओन्सेन्गो" जहाँ होटलहरू छरिएका छन्।
कावासागुचिको तालको वरिपरि प्रमुख पर्यटक आकर्षणहरू यस प्रकार छन्।
माउन्ट फुजी पनोरमिक रोपवे
माउन्ट लिनुहोस् फुजी पनोरमिक रोपवे र तपाईं। मिनेटमा कावागुची तालको पूर्व तर्फ My.Tenjo को शिखरमा पुग्न सक्नुहुनेछ। उचाई १,०3 meters मिटरको अवलोकन डेकबाट, तपाईं माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। फुजी र कावागुचिकोको सम्पूर्ण दृश्य।
यो १aw मिनेट पैदल छ कावागुचिको स्टेशनबाट रोपवे स्टेसनसम्म पहाडको फेदमा।
दर्शनीय नौका "Ensoleillé"
कावागुचिको तालमा, दर्शनीय डु Bo्गा "एन्सेलीली" पर्यटकहरूकोलागि सञ्चालन गरिन्छ। यो डु 120्गा १२० व्यक्तिको लागि हो। डु boat्गा स्टेशन कावागुचीको स्टेशन बाट १ 15 मिनेट पैदल अवस्थित छ। डु boat्गाले कावागुची तालको वरिपरि २० मिनेट यात्रा गर्‍यो।
यदि तपाईंले यस डु boat्गालाई रोपवेमा लिनुभयो भने, तपाईंलाई प्राय: कावागुचिको सम्पूर्ण तस्वीर थाहा हुनेछ। र तपाइँ सुन्दर Mt.Fuji को कदर गर्न सक्षम हुनु पर्छ।
माउन्ट शरद Fतु मा फुजी
कावागुचीको ताल, रंगीन शरद asonतु र माउन्टेन फुजी बिहान कोहरे र रातो पातहरूको साथ कावागुचीको, जापान = शटरस्टक
कावागुची तालमा तपाईं माउन्टको सुन्दर दृश्यबाट सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। कुनै विशेष आकर्षणको लागि खोज बिना प्रत्येक मौसम फुजी।
कावागुचिको तालको उत्तरी किनारमा करिब १ 150० मिटर लामो नक्सा छ। यी नक्शाले प्रत्येक बर्ष अक्टोबरबाट रंग परिवर्तन गर्न थाल्छ, र मध्य नोभेम्बरदेखि नोभेम्बरको अन्तसम्म शरद पातहरूको शिखरमा पुग्छ। यदि तपाईं यो समयमा कावागुचिको जानुहुन्छ भने, तपाईं माउन्टको शरद alतु दृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ। फुजीलाई माथिको फोटो मनपर्‍यो।
माउन्ट जाडोमा फुजी
माउन्ट फुजी जाडोमा हिउँको साथ कावागुचीको जापान h शुटरस्टकमा
माउन्ट हिउँदको मौसममा फुजी सबैभन्दा सुन्दर देखिन्छ। किनभने यस अवधिमा हावा एकदमै स्पष्ट छ।
कावागुचिको तालमा, वर्षमा धेरै पटक हिउँ परिरहन्छ। भोलिपल्ट जब हिउँ पसे, त्यहाँ धेरै घमाइलो समयहरू छन्, माउन्टको दृश्य। त्यस समयमा फुजी सबैभन्दा अचम्मको छ।
किनभने उचाई कावागुची तालको वरिपरि छ, हिउँदको दिन बाहेक यो जाडोमा चिसो हुन्छ। भर्खरको लेक कावागुचिको क्षेत्रको तापमान निम्नानुसार छ।
डिसेम्बर: अधिकतम ° डिग्री सेल्सियस / न्यूनतम -8 डिग्री सेल्सियस
जनवरी: अधिकतम ° डिग्री सेल्सियस / न्यूनतम - ° डिग्री सेल्सियस
फेब्रुअरी: अधिकतम ° डिग्री सेल्सियस / न्यूनतम -6 डिग्री सेल्सियस
जे होस् यो तालमा स्थिर छ, तर यो त्यति बाक्लो छैन। यो सजिलै भाँच्दछ जब तपाईं बरफमा सवारी गर्नुहुन्छ। कृपया सावधान हुनुहोस् किनकि यो धेरै खतरनाक छ।
माउन्ट कावागुचिको तालको वरपरको होटेलबाट फुजी
Japaneses onsen र माउन्ट फुजी दृश्य = शटरस्टक
कावागुतीको तालको पूर्वी किनारमा, ओन्सेन (तातो स्प्रि )हरू) भएका होटलहरू छरिएका छन्। यस क्षेत्रलाई सामूहिक रूपमा कावागुचिको ओन्सेन भनिन्छ। मलाई लाग्छ कि माउन्ट हेर्नु यो अद्भुत छ। यस क्षेत्रको होटलबाट फुजी।
सत्य बोल्न, जापानीहरूले यस क्षेत्रमा तातो वसन्त रिसोर्टमा बढी ध्यान दिएनन्। यद्यपि हालसालै विदेशी पर्यटकहरूले यस क्षेत्रमा ध्यान दिन थाले। नतिजाको रूपमा, होटलहरू नविकरणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् र यो अझ राम्रो र राम्रो हुँदै गइरहेको छ।
मैले कागागुचिको ओन्सेनलाई पनि लेखेको थिए जसलाई तल तातो स्प्रि .्ग्सको बारेमा लेख थियो। कृपया आपत्ति छैन भने निम्न लेख द्वारा ड्रप गर्नुहोस्।
>> कावागुचिको ओन्सेनको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेट जापानको सबैभन्दा ठूलो आउटलेट मल्ल हो जुन माउन्टको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। फुजी यहाँ २०० भन्दा बढी ब्रान्ड शपहरू लाइनमा छन्।
यो आउटलेट मल पर्यटकहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ। माउन्ट हेर्दा तपाईं किनमेलको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको अगाडि फुजी। दुबै MT.Fuji र यो आउटलेट मल शानदार छ, त्यसैले तपाईं धेरै सहज महसुस गर्नुहुनेछ।
मैले तल किनमेलको बारेमा लेखमा गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरूको विवरण प्रस्तुत गर्‍यो। यदि तपाईंलाई मनपर्दछ भने कृपया लेखलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
>> गोटेम्बा प्रीमियम आउटलेटहरूको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
ओशिनो हक्काई फुजी फाइभ ताल तालको सानो गाउँ हो, जुन कावागुचिको तालमा र ताल यामानाकाको = शटरस्टकको बीचमा अवस्थित छ।
ओशिनो, यामानशी, जापान = शटरस्टकमा ओकामाइक पोखरी
ओशिनो हक्काई कावागुची तालको दक्षिणमा ओशिनो गाउँमा आठ पोखरीहरूको लागि एक सामूहिक शब्द हो। "हक्काई" को अर्थ जापानीमा आठ समुद्र हो। यी पोखरीहरूको तलबाट, माउंटको पिघलने पानी। फुजी स्प्रि .्ग। यी पोखरीहरू यति सुन्दर छन् कि पर्यटकहरूले पोखरीलाई अन्वेषण गर्दा माउन्ट हेर्नुहोस्। फुजी
भनिन्छ कि यहाँ एउटा प्राचीन ताल थियो। जे होस्, ताल सुख्खा भयो। तालको वसन्त पानी बाहिर आउने ठाउँ मात्र पोखरीको रूपमा रह्यो।
ओशिनो हक्कैबाट देखिएको फुजी अद्भुत छ, तर दिउँसो यो ब्याकलिट हुनेछ। तपाईं बिहान जानको लागि राम्रा तस्बिर लिन सक्नुहुनेछ।
सेतो हंस माउन्ट फुजीको साथ यामानाकाको ताल, यामानशी, जापान = शटरस्टकमा
ताल यामानाकाको माउन्टको पश्चिम तर्फ रहेको ताल हो। फुजी त्यो फुजी फाइभ लेकहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। किनभने उचाई 980० मिटर छ, टोकियोको साथ तापमान भिन्नता degrees डिग्री भन्दा बढि छ। यो गर्मी मा अपेक्षाकृत राम्रो छ र यो एक गर्मी रिसोर्ट हो। किनकि त्यहाँ धेरै टेनिस कोर्टहरू छन्। यस तालको वरिपरि, यो अक्सर जापानी कलेज विद्यार्थीहरूले गर्मी शिविर गन्तव्यको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
यो ताल उच्च उचाई र एक गहिरो पानी गहिराइ छ, त्यसैले यो अक्सर जाडो मौसम मा स्थिर। यदि तपाईं माउन्ट शूट गर्न चाहानुहुन्छ भने। हिउँदमा हिउँदमा फुजी, तपाई यस ताल वरिपरि शुट गर्न सक्नुहुन्छ।
यामानाकाको लागि यो माईलबाट २ 25 मिनेटको बस सवारी हो। फुजीक्यू लाइनको फुजी स्टेशन। यो JR Gotemba स्टेशन बाट minutes० मिनेटमा छ।
Saiko Iyashino-Sato Nenba पुरानो जापानी गाउँ एक पुनर्निर्माण जापानी गाउँ हो जहाँ आगन्तुकहरूले पत्ता लगाउन सक्छन् प्रत्येक व्यक्तिगत भवनमा = शटरस्टक
Kawaguchiko स्टेशन बाट बस द्वारा खुला air० मिनेट पश्चिम मा खुला एयर संग्रहालय "Saiko Iyashino-Sato Nenba" स्थित छ। यहाँ भित्ता छतको २० वटा पुरानो घरहरू छन्। तपाईं सुन्दर जापानी बस्ती र माउन्टको तस्वीर लिन सक्नुहुन्छ। फुजी
यहाँ वास्तविक ग्रामीण गाउँ हुन्थ्यो। यद्यपि, १ 1966 .XNUMX मा, आँधीबेहरीले मलबेको बहाव भयो र गाउँ ध्वस्त भयो। गाउँलेहरू अर्को ठाउँमा बसाई सरे। त्यस पछि, निजी घर पुनर्स्थापित गरियो, र खुला एयर संग्रहालयको जन्म भयो।
यस खुला एयर संग्रहालयमा, तपाईं यहाँ बस्ने जो जापानी किसानहरूको संसारलाई पुन: स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भ्रमण गर्दा मैले कडा महसुस गरें भन्ने तथ्य यो हो कि त्यहाँ धेरै माउन्टबाट बगिरहेको छ। फुजी यदि तपाईं यहाँ जानुभयो, तपाईंले पक्कै माउन्टको पानीको आशिष् महसुस गर्नुभयो। फुजी
जाडोमा यस क्षेत्रमा समय-समयमा हिउँ पर्दछ। यदि तपाईं हिउँ पछ्याउनुभयो भने, तपाईं एक अविश्वसनीय ईश्वरीय संसारको अनुभव गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
ताल Motosuko र माउंट। जाडो मौसममा बिहान सबेरै फुजी। तालको मोटोसुको फुजी पाँच तालहरूको पश्चिमी भाग हो र दक्षिणी यामानशी प्रान्तमा माउन्ट फुजी, जापानको नजिकै रहेको = शटरस्टक
यदि तपाईं कावागुचिको र ताल यामानाकाको ताल भन्दा शान्त र रहस्यमय तालमा जान चाहानुहुन्छ भने, म मोटोसोको ताललाई सिफारिश गर्दछु।
ताल मोटोसुको फूजी फाइभ लेकको पश्चिमी तर्फ हो। यो पाँच तालहरू बीचमा तेस्रो ठूलो हो। यसको अधिकतम पानीको गहिराई १२१..121.6 मिटर छ, उच्च पारदर्शिता।
मैले मोटोसुको तालमा विशेष रूपमा सिफारिस गरेको क्षेत्र तालको उत्तरपश्चिमपट्टि हो। उत्तरपश्चिमी किनारमा "कोआन क्याम्पग्राउन्ड" को वरिपरि देखिएको MT.Fuji को दृश्य अत्यन्तै शानदार छ, र यो जापानको हजार-येन बिलमा छापिएको छ।
म नोभेम्बरमा यस क्याम्पसाइट कुटीरमा बसे र माउंटबाट सूर्योदय देखें। फुजी सुरुमा तारा चम्किन्थ्यो र ताल चाँदनीसँग चम्किरहेको थियो। अन्तत: माउन्टको वरपर फुजी निलो भयो, र वरिपरिका पहाडहरू सूर्य घामको क्षणमा चम्किरहेका थिए। मैले यस्तो अद्भुत दृश्य कहिल्यै देखेको छैन।
माउन्ट फुजी र शिबाजाकुरा (काई फ्लोक्स, काई गुलाबी, पहाडी फ्लोक्स)। जापान प्रतिनिधित्व गर्दछ एक शानदार वसन्त परिदृश्य = शटरस्टक
मोटोसुको तालको दक्षिणपट्टि माउन्टको विशाल ढलान। फुजी फैलदै छ। त्यहाँ "फुजी शिबाजाकुरा महोत्सव" मध्य अप्रिल देखि मेको लेटसम्म आयोजित हुन्छ। यस समयमा, शिबाजाकुरा (काई फ्लोक्स) सम्पूर्ण ठाउँमा खस्कनेछ, माउन्ट दृश्यहरू बनाउनेछ। फुजी अझ सुन्दर।
फुजी शिबाजाकुरा महोत्सवको बारेमा, म जापानमा फूल बगैंचाको बारेमा लेखमा परिचय दिन्छु। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> फेस्टिवलको बारेमा विवरणहरूको लागि, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Asagirikogen मा गाई चरन माउन्ट फुजी दृश्यहरु = शटरस्टक
Asagirikogen Highland माउंट को पश्चिममा फैल एक विशाल पठार हो। फुजी यदि तपाईं यो पठारमा जानुहुन्छ भने तपाईं ठूलो माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। तिम्रो अगाडी फुजी।
Asagirikogen Highland उचाई मा 700-1000 मीटर छ। यो गर्मीमा पनि तुलनात्मक रूपमा सुन्दर छ, त्यसैले यो गर्मी रिसोर्टको रूपमा लोकप्रिय छ। त्यहाँ धेरै खेतहरू छन्। त्यहाँ स्थानहरू पनि छन् जहाँ तपाईं प्याराग्लाइडिंग अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। हालसालै, अटो शिविर साइटहरूको संख्या बढ्दो छ।
कावागुची-को भन्दा दक्षिणबाट यस पठारमा जानु उत्तम हो। यो JR Minobu लाइन को Fujinomiya स्टेशन बाट बस बाट लगभग uj० मिनेट को दूरीमा छ।
मिहो नो मत्सुबारा माउन्टको 45 km किमी दक्षिण पश्चिममा अवस्थित समुद्री तट हो। फुजी यस तटमा kilometers किलोमिटरको लागि ,30,000०,००० भन्दा बढी पाइन रूखहरू छन्। माउन्टको दृश्य तटबाट फुजीको जापानको बुढेसकालमा प्रशंसा गरियो। यस ईतिहासको कारणले गर्दा, जब माउंट। फुजी विश्व सम्पदा साइटका रूपमा दर्ता भएका थिए, मिहो कुनै मत्सुबार पनि सँगै दर्ता गरिएको छैन। त्यसैले यो धेरै पर्यटकहरूको भीड हो।
मिहो कुनै मत्सुबारा टोक्यो र क्योटोलाई जोड्ने मार्ग (टोकैडो) बीचमा छैन, विगतमा धेरै पर्यटकहरू रोके। हिरोशिग UTAGAWA, एदो अवधि को एक प्रसिद्ध चित्रकार, पनि मिहो नो matsubara चित्रित। यदि तपाईं जापानी चित्रकला र ईतिहासमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं मिहो न मत्सुबार जान जान सक्नुहुन्छ।
Miho कुनै matsubara को प्रवेशद्वार को लागी, यो जेआर Shimizu स्टेशन बाट बस बाट लगभग 30 मिनेट छ।
माउन्ट, फुजी, र, एनोशिमा, शोनान, कानगावा, जापान = शटरस्टक
यदि तपाईं टोकियोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, किन एनोशिमा टापुबाट रोकिनु हुँदैन जुन ओन्डाकि रेलवेको र्यापिड एक्सप्रेस "रोमान्स कार" बाट शिन्जुकु स्टेशनबाट करिब एक घण्टाको दूरीमा छ।
एनोशिमा एउटा सानो टापु हो जुन माउन्टबाट 70० किलोमिटर टाढा अवस्थित छ। फुजी यद्यपि यस टापुको नजिकको अद्भुत समुद्री तटबाट तपाईंले माउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। फुजीलाई माथिको फोटो मनपर्‍यो। एक घमाइलो दिन मा साँझ माउंट को सिल्हूट। फुजी सुन्दर सूर्यास्त द्वारा आकार लिएको छ।
म मेरो परिवारको साथ एनोशिमा नजिकैको एउटा होटलमा बस्ने गर्थें र बिहान र साँझ यस समुद्री तटको वरिपरि हिंडें। म अचम्मित भए कि माउंट। फुजी kilometers० किलोमिटर टाढा छ तर त्यहाँ एक धेरै बलियो उपस्थिति छ। म तपाईलाई माउन्ट हेर्न सिफारिस गर्न चाहन्छु। एनोशिमा वरपरका फूजी।
माउन्ट फुजी = शटरस्टकको दक्षिणी भागमा 5th औं स्टेशनमा परिदृश्य दृश्य पोइन्ट
फुजी सुबारु लाइन 5th औं स्टेशन, योशिदा ट्रेलको आधा बाटो बिन्दु, जुन पहाडको आधारमा फुजीयोशिदा सेन्जेन तीर्थबाट माउन्ट फुजी = शटरस्टकको शिखरमा जान्छ
माउन्टमा चढ्ने फुजी सामान्यतया पाँचौं स्टेशन (आधा बाटो) बाट सुरू हुन्छ। व्यक्ति कारबाट पाँचौं स्टेशन जान सक्दछन्। आवास, रेस्टुरेन्ट, स्मारिका पसलहरू, इत्यादि पाँचौं स्टेशनमा पंक्तिबद्ध छन्। पर्वतारोहणहरू यहाँ तयार छन्। र तिनीहरू पाँचौं देखि छैठौं, सातौं, आठौं, नवौं मा चढ्छन् र अन्तमा शिखरमा पुग्छन्।
माउन्ट फुजीसँग चारवटा मुख्य आरोहण मार्गहरू छन्। पाँचौं स्टेशनका सुविधाहरू सबै भन्दा सन्तोषजनक रहेको मार्ग उत्तरमा योशिदा मार्ग हो। यो 5th औं स्टेशनको उचाई २,2,305०5 मिटर छ। यदि तपाईं योशिदा मार्गमा XNUMXth औं स्टेशनमा जानुभयो भने, तपाईं वरिपरि हिंड्न, भोजन र शपिंगको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। तपाईं पनि एक घोडा सवारी गर्न सक्नुहुन्छ।
माउन्ट फुजी आरोहण जुलाईको शुरुदेखि सेप्टेम्बरको मध्यसम्म सीमित छ, तर योशिदा मार्गमा 5th औं स्टेशनको धेरै सुविधाहरू अप्रिलको मध्यदेखि डिसेम्बरको बीचसम्म खुला छन्। तपाईं माउन्टको शक्ति महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। फुजी यति नजिक।
समस्या यो छ कि कसरी 5th औं स्टेशनमा जाने छ।
कृपया दुई चीजहरूमा ध्यान दिनुहोस् र ध्यानपूर्वक तपाईंको यात्रा योजना बनाउनुहोस्। पहिलो, ग्रीष्म पर्वतारोहण मौसम (जुलाई १ देखि सेप्टेम्बर १० योशिडा मार्गमा), फुजी सुबारु लाइन प्राय: निजी कारको ट्राफिक नियमन गर्दछ। यसैले यस अवधिमा भाँडा-कारमा भन्दा बस प्रयोग गर्नु राम्रो हो।
यस मौसममा विभिन्न बसहरू सञ्चालन हुन्छन्। यो फजिक्यू रेलवेको कावागुचिको स्टेशनबाट योशिदा रूटको 50th औं स्टेशनमा by० मिनेटको दूरीमा छ। थप रूपमा, त्यहाँ धेरै दर्शनीय बसहरू छन् जुन टोकियोबाट यस 5th औं स्टेशनमा सिधा जान्छन्।
दोस्रो, चढाई मौसम समाप्त भएपछि धेरै बसहरू चल्दैनन्। त्यसैले कृपया यदि तपाईं चाहानुहुन्छ बस सञ्चालन हुन्छ भने अग्रिम जाँच गर्नुहोस्।
कावागुचिको क्षेत्रबाट पाँचौं स्टपमा जाने रुट बस मूलतः पर्वतारोहण सिजन समाप्त भए पछि पनि संचालित हुनेछ। जहाँसम्म, पाँचौं स्टेशन (फुजी सुबारु लाइन) सम्मको सडक अक्सर हिउँका कारण बन्द हुन्छ। यस समयमा, बस कोर्सको कुराको रूपमा संचालित हुने छैन।
केही व्यक्तिहरू शरद .तु देखि निजी कारहरू प्रयोग गरेर 5th औं स्टेशनको लागि लक्ष्य राख्छन्। यद्यपि गर्मी बाहेक, माउन्ट। फुजी खतरनाक स्थान हो, त्यसैले कृपया कहिले जबरजस्ती नगर्नुहोस्।
>> कृपया माउन्टको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्। विवरणका लागि फुजी।
माउन्टको शिखरमा हाइकर्स सूर्योदयको समयमा फुजी = शटरस्टक
शिखरमा आरोहीहरूको भीड। अधिकांश जापानीहरू रातमा फुजी पहाडमा चढ्छन्, शिखरमा वा नजिकैको स्थानमा हुनको लागि जब सूर्य उदाउँछ = शटरस्टक
यदि तपाइँ ग्रीष्म Japanतुमा जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, मलाई लाग्छ कि माउन्ट माथिको शीर्षमा चढ्नु राम्रो विचार हो। फुजी माउन्टको पाँचौं स्टेशनमा अन्वेषण गर्न रमाईलो छ। फुजी, तर दृश्य शिखरमा धेरै सुन्दर छ।
तपाईं जुलाई देखि सेप्टेम्बरको शुरुमा चढ्न सक्नुहुन्छ। हालसालै, विदेशी पर्यटकको लागि पर्यटन बढ्दै छ, त्यसैले ती यात्राहरूमा भाग लिनको लागि यो राम्रो हुन सक्छ।
चढाई माउन्टको सन्दर्भमा। फुजी, मैले हाइकि aboutको बारेमा लेखमा परिचय दिएँ। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> आरोहण माउन्टको बारेमा विवरणहरूको लागि। फुजी, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्